Sida loo iibiso Broken iPhone u qaado lacagta ugu badan
Sida loo iibi iPhone Your jaban qiimo wanaagsan
Waxaa jiri kara sababo kala duwan si ay u iibiso iPhone. Waxaa laga yaabaa in aad dooneyso in la gaarsiiyo iPhone 4 ilaa iPhone 5s; waxaa la jebiyey oo aadan rabin in lagu dhiso; heshay kaliya hal cusub ee dhalashada; ama aad doonayso inaad ugu bedesho telefoonka ah Android sida Samsung Galaxy S5. Arrinta No sabab waxa aad rabto in aad iibiso aad loo isticmaalo iPhone, waa in aad rabto in aad hesho qiimo wanaagsan oo aad u ilaaliso arimahaaga gaarka ah. Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay in aad ogaato:
Qaybta 1. Waxyaabaha Waa in aad ka ogaato ka hor inta Iibinta iPhone
Qaybta 2. Meelaha Best inay iska iibiso iPhone u Money ugu
Waxyaabaha Waa in aad ka ogaato ka hor inta Iibinta iPhone
# 1. Xogta iPhone aad ee kaabta
1) Haddii aad ku socoto in ay isticmaalaan iPhone cusub, sida ugu wanaagsan ee aad gurmad iPhone waa in la isticmaalo Lugood ama iCloud. Waxaad sameyn kartaa in gurmad aad iPhone la mid click via Lugood ama iCloud. Markaas si fudud u soo celin kartaa si aad iPhone cusub.
2) Ma doonaysaa in la isticmaalo taleefanka ku salaysan nidaam kale sida Android? Markaas aadan u malaynayeen in ay gurmad aad iPhone la Lugood ama iCloud, maxaa yeelay, ma aad isticmaali kartaa file gurmad mustaqbalka si kasta, xitaa wuu akhriyey. Waxaad si fiican u isticmaali lahaa qalab dhinac saddexaad, sida Wondershare TunesGo in gurmad aad files warbaahinta, iyo xiriirada in computer, si aad iyaga dajiyaan karaa in aad telefoon cusub. Ama waxaad kaliya ku wareejin kartaa dhammaan xogta laga jir iPhone in ay telefoonka aad cusub ka hor iibinta. My talo waa mid ka mid labaad. Waxaa inta badan ka sahlan. Ha ka werwerin aan ogayn wax noocan oo kale ah qalabka. Waxaad isticmaali kartaa MobileTrans , taas oo kuu oggolaanaysa in aad xogta ka mid ah iPhone, telefoonada Android iyo telefoonada Symbian wareejiyo. Waxaa ka shaqeeya sida soo jiidashada ah.
Halkan waxaad ka heli kartaa version maxkamadda for free!
# 2. Masixi dhammaan xogta ku used iPhone
Waa in uu jiraa xog quruxsan, sida farriimaha, xiriirada, sawiro, koontada bangiga iyo ka badan oo sidan oo kale aad iPhone, waayo, aad u isticmaalo waqti dheer ah. Sidaa darteed, ma si toos ah iibiso iPhone aan shaqada tirtirka ah samaynayaan. Waxaad waa. Tani waa sida ugu badan ee muhiim ah sida taageero ilaa xogta aad, ama aad lumiso doonaa gaarka ah. Waxa kale oo jira laba siyaabood oo loo masixi dhammaan macluumaadka aad loo isticmaalo iPhone.
1) Dib u celi aad iPhone in goobaha warshad: Dad badan ayaa dooran sidan inaan tirtiro dhammaan xogta ku iPhone marka ay u baahan tahay inay tan sameeyaan. Waa wax iska fudud: Settings tuubada> General> celi> masixi All Content iyo Settings. Markaasay aad iPhone noqon doonaa mid cusub.
2) Tan waxaa jira barnaamijyo kabashada xog badan oo ku saabsan suuqa inuu ka soo kabsado xogta ka iPhone, waxaa laga yaabaa inaad ka welwelsan tahay in dad kale ay soo kaban karto xogta aad ka iPhone. Wax macno ah ma. Waxaad isku dayi kartaa SafeEraser Wondershare ama SafeEraser Wondershare u Mac inaan tirtiro wax walba oo ku saabsan iPhone, waa mid cusub oo aan wax xogta shakhsi ahaaneed samaynta.
Waxaad halkan kala soo bixi kartaa Wondershare maxkamad version SafeEraser!
Meelaha ugu fiican ee la iibi iPhone u qaado lacagta ugu badan
Sida loo Iibiya
Talo & Tricks
Craigslist $ 225-- $ 500 Lacag caddaan ah ama habab kale bixinta Ku xiran tahay iibiyaha Post on craigslist iyo kulmi iibsadaa Marka la barbar dhigo dukaamada kale, craigslist noqon kartaa meesha ugu fiican inay iska iibiso iPhone isticmaalay taas oo aan qaab ciyaareed fiican, laakiin waxay u baahan tahay dadaal iyo dulqaad. Waa in aad gacan bir ah emaillada iyo scammers, meel nabdoon oo dadweynaha si uu u dhameystiro heshiiska ay la iibsadaa.
Arbacada ah $ 230 - $ 430 PayPal Ka dib markii lacag (pickups at-guriga waa la heli karo) Xaraashka Setup ama dooran liiska qiimaha go'an Si aad u qanciyo dadka isticmaala inay dalab aad iPhone qiimo sare, waa in aad hubisaa in aad iPhone ku jiraa xaalad wanaagsan. Waa caqli u leedahay in sanduuqa iyo qalabka ay la socdaan qalabka iyo sawir ku qaad u roon tahay iyaga.
Amazon $ 120-- $ 408 Amazon Gift Card Markab iPhone in ay Amazon si aad u hesho kaarka hadiyadda 1.Submit ganacsiga-ee iPhone;
2. Ship iPhone in Amazon si aad u hesho kaarka hadiyadda, Waad looga baahan yahay, in la yidhaahdo waxa xaaladda iPhone yahay iyo macluumaad loogu talagalay hal maala, side, awoodda, midabka, iwm. Sidaas, fadlan macluumaad cad oo dhan ka hor.
BestBuy $ 148 - $ 346 Best Buy Gift Card ama jeeg Markab iPhone ama u geeyn Best Buy Store Iibi online ama Best Buy dukaanka leben-iyo-madfac Haddii aad iPhone waxaa gebi ahaanba la jebiyey, waxaad dooran kartaa dukaamada kale, sida Walmart. In kastoo Best Buy waxay dib kuu soo diri doonaa lacag la'aan wax, wax aad u hesho. Wixii gebi jebiyey iPhone, Walmart oo RadioShack ilaa aad siin $ 70 ama $ 80.
NextWorth $ 96 - $ 340 Check Markab iPhone ka hor inta lacag 1.Select model aad rabto in aad sii iibin,
2.Answer su'aalo ku saabsan iPhone;
3. Ship iPhone iyo lacag; Ha overrate aad loo isticmaalo iPhone ama aad noqon doontaa niyad;
Cawsha $ 96 - $ 401 PayPal, hubi, Amazon Gift Card Cawsha bixin doonaa sanduuq oo pre-paid calaamadda maraakiibta ka dib marka aad aqbasho qiimaha online; 1. Raadi si aad wax ku www.gazelle.com;
2.Answer qaar ka mid ah su'aalaha ku saabsan iPhone;
3.Confirm soo bandhigto iyo bixinta;
4.Ship iPhone iyo lacag; Ka hor inta iibinta aad loo isticmaalo iPhone halkan, aad looga baahan yahay inay ka jawaabto dhawr su'aalood oo ku saabsan iPhone, si fiican aad ka heli lahaa in la ogaado dhammaan faahfaahinta ku saabsan iPhone hore.
Apple Store $ 0 - $ 336 Apple Gift Card Markab aad iPhone kadib marka qiyaasta ka Apple 1.Go in website in aad ka jawaabto xoogaa su'aalo ah,
qiyaasta 2.Get oo markab in Apple,
3.Get bixiyo; Ka hor inta iibinta aad loo isticmaalo iPhone, hubi in aad iska soo jeestay Raadi My iPhone (Settings> iCloud> Hel My iPhone), ma jirto wax dhaawac biyaha iyo oo dhanba way wanaagsan yihiin, ama aad si fiican u heli dukaanka kale maxaa yeelay waxaad noqon doontaa lacag aad uga yar. Haddii aad iibisid iPhone ee Apple tafaariiqda Store, waxay kuu ogolaaneysaa in aad ku ganacsan hore iPhone in credit marka lagu casriyeeyo.
Walmart $ 80-- $ 315 Walmart eGift Card Markabka waxa ay ka hor lacag
1.Go in website oo dhamaystiran qiimayn;
2.Ship aad loo isticmaalo iPhone; 3.Confirm heshiiska oo aad hesho lacag bixinta;
Haddii aad iPhone waa tolly jabay, waxaad u soo Walmart iibin karaan. Ka sokow $ 70 ama $ 80 aad doonto aad, aad iPhone la dispoded doonaa hab deegaanka ka masuul. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa in aad u hubiso in iPhone waa in Walmart "Model Magaca" liiska.
GameStop Under $ 200 GameStop credit ama lacag caddaan ah Soo qaado iPhone in deegaanka GameStop 1.Get aad iPhone valuted ee GameStop.com;
2. Print aad quote oo keena in Gamestop. Gamestop ku siinayaa badan oo qiimo dheeraad ah si aad u iPhone haddii aad dooneyso in aad ogolaato in-dukaanka credit halkii ay lacag caddaan ah tahay.
RadioShack $ 72- $ 300 Lacag caddaan ah Ship lacag la'aan ah ama waxa ay keenaan deegaanka RadioShack 1.Get iPhone qiimeeyo online;
2.Accept xigashada iyo markab ama keeni dukaanka deegaanka RadioShack; Sida Walmart, si aad u RadioShack iibin kartid aad iPhone totoally jabay in ka badan $ 70;